ဇန်နဝါရီလ 2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇန္နဝါရီလ
Huntsville, Alabama - PESA, streaming များဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ယနေ့ Key ကို Code ကိုမီဒီယာ end-to-end turnkey စနစ်များများအတွက်ခြွင်းချက်ထောက်ခံမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအဓိကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်အတူသစ်တစ်ခုမိတ်ဖက်ကြေညာခဲ့သည်။ သမာဓိဒေါင်လိုက်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးအတွက် client များအတွက်သူ့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်သို့ PESA Xstream streaming များကရိယာထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ "ကျနော်တို့ကဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ ...
ဒီဂျစ်တယ်ပုန်ကန်မှုသည် Professional ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက် Cloud-based Software Solution ကိုပူးပေါင်းရန်အဓိကနောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုန်ကန်မှုဦးဆောင်သောဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှု software ကို tools များ၏ developer များယနေ့ Kollaborate cloud-based ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ခွင့်ပြုချက် software ကိုဖြေရှင်းနည်းအသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုခင်းကျင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kollaborate လုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင် Workflows ချောမွေ့ဖို့ tools တွေကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော suite ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှု / post ကိုဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲ။ ဘက်စုံနှင့်ချက်နဲ့, Kollaborate, ချက်ချင်းကို real-time တုံ့ပြန်ချက် features ...
Albis Technologies ကချိန်းဆို Access ကို Solutions ၏နယူးဌာနမှူး
ဇူးရစ် - ဇန်နဝါရီ 30, 2015 - Albis Technologies ကကကုမ္ပဏီရဲ့ access ကိုဖြေရှင်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဦးခေါင်းအဖြစ်အဲရစ်ဗန်တွင်း Heuvel အဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, ဗန်တွင်း Heuvel ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, အရောင်းနှင့် Albis Technologies က '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်း access ကို, မိုဘိုင်း backhaul, လက္ကားများ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကားမောင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နှင့်ကြလိမ့်မည် ...
အဆင်သင့်, သတ်မှတ်, Live! က Sky News, ပထမဦးဆုံး Inmarsat ကို Global Xpress®ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်လွှင့်နေထိုင်ကြသည်။
30 ဇန်နဝါရီလ, 2015 - နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်တိုင်ဆီသို့လက်လှမ်းမှီ, ဗြိတိန်ရဲ့က Sky News, အောင်မြင်စွာပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်, Inmarsat ရဲ့အသစ် Ka-band ကိုဂြိုဟ်တုကွန်ရက်ကို Global Xpress® (GX) ကနေတဆင့်အပေါ်-air ထုတ်လွှင့်။ Network မှတီထွင် (ni) နှင့် Inmarsat နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. , Sky News, ပု 5th ဇန်နဝါရီလဂရိရွေးကောက်ပွဲသတင်းအေသင်ကနေကုမ္ပဏီမှ GX ဂြိုဟ်တု (Inmarsat-1 F25) ဘရော့ဘန်းကွန်ယက်စမ်းချောင်း HD ဗီဒီယိုအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ် ...
SSL C10 သည် SHOPPING CHANNEL ၏ HD ထုတ်လုပ်မှုသို့အေ့ဒ်စ်ရောဂါကိုသက်သာစေသည်
Mississauga, အွန် - တစ်ဦးက Solid State Logic C10 Compact ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလွှင့် Console အပြည့်အဝ-HD ကိုထုတ်လုပ်မှုဖို့ဘူတာရုံရဲ့ switch ကိုကူညီပေးဖို့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လူကြိုက်များလက်လီအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏စက်ရုံအဆိုပါစျေးဝယ်ချန်နယ် (TSC) တွင် install လုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘူတာရုံရဲ့အသံအသင်းအားအလွန်အသုံးဝင်သောသော C10 ၏တနျခိုး, ဖြေလျှော့-of အသုံးပြုမှု, အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် software နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။ TSC ...
Kraft အားကစားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆူးပင်ကိုဆက်သွယ်ရေး Professional ကအမေရိကန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏အချိန်မီသတင်းပေးပို့မှုအတွက် Dejero အပေါ်ကိုအားကိုးပါ
ဇန်နဝါရီလ 29, 2015 - - Dejero, မိုဘိုင်း newsgathering ထုတ်ကုန်များစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အာဏာအရှိဆုံးနှင့်စွယ်စုံပလက်ဖောင်း၏ဆုရဖန်တီးသူ Dejero မိုဘိုင်း transmitter Kraft နှင့်ဆူးပင်ကိုဆက်သွယ်ရေး သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးနှင့်အလွန် Little ကလဒ်အချိန် Waterloo, အွန်နဲ့အတူဘောလုံးပရိသတ်များမှဗီဒီယို Get မှ Allow ယနေ့ Kraft အားကစားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆူးပင်ကိုဆက်သွယ်ရေးဟာကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ခရီးဆောင် Dejero တိုက်ရိုက် + ကိုသုံးကြောင်းကြေညာ ...
လန်ဒန် 29 ဇန်နဝါရီလ 2015 - BVE 2015 မှာ 24-26 ဖေဖော်ဝါရီလကနေ Excel လန်ဒန်မှာအရပျကိုယူပြီး, လန်ဒန်ရဲ့ Ravensbourne ဘွဲ့ကြိုထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်သင်တန်းများအနေဖြင့်ကိုးကျောင်းသားများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနေ့စဉ်ပြပွဲအတွက်ကူညီခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့အကြုံကိုရရှိပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ BVE ပြပွဲကြမ်းပြင်ကနေ။ "ကျနော်တို့က BVE ပါဝင်ခံရဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခံရဖို့လုံးဝဝမ်းသာနေကြသည် ...